अबैध गाडीमा सरकारी कार्यालयकै कर्मचारीले हाल्छन् नक्कली नम्बर प्लेट ! « News24 : Premium News Channel
अबैध गाडीमा सरकारी कार्यालयकै कर्मचारीले हाल्छन् नक्कली नम्बर प्लेट !
बारा । बाराको पथलैया स्थित राजश्व अनुशन्धान कार्यालयमा रहेका ३ वटा अबैध गाडीमा कार्यालयकै कर्मचारी एउटै नम्बर प्लेट हालेर चलारहेका छन् । बुधबार कार्यालय परीसरमा रहेका यी ३ वटै गाडीको नम्बर बा १२ च ६७९० नै छ ।
यो नम्बर पनि करिब एक बर्ष अघि अबैध चाँदीसहित बरामद भएको सुजुकी वाग्नर कारको नम्बर हो । र यही नम्बर अन्य २ वटा सवारीमा पनि प्रयोग गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार एक साताअघि मात्र राजश्व अनुशन्धान कार्यालय बाराका प्रमुख राजनकुमार बीसीकै निर्देशनमा नम्बर प्लेट तयार भएका थिए । यो बिषय कार्यालय प्रमुख बीसीले आफूलाई जानकारी नभएको र पछि आउन लगाए ।
दुई बजे पुन कार्यालयमा पुग्दा एउटा गल्ती सच्याउन फेरी अर्को गल्ती गरेको भेटियो । एउटै नम्बर प्लेट भएका गाडी मध्य एउटाको नम्बर प्लेट झिकेर राखिएको थियो भने अर्को गाडीको नम्बर प्लेट परिर्वतन गरी ना २ च ९५१० राखिएको थियो ।
परिर्वतन गरेर राखिएको नम्बर प्लेट समेत अर्को गाडीको रहेको खुलेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जको रेकर्ड अनुसार ना २ च ९५१० नम्बरमा ‘महिन्द्रा कम्पनीको डबल क्याप पिकअप’ गाडी दर्ता रहेको छ ।
यो गाडीको वास्तविक नम्बर युपी १३ बीबी ७२६० हो । गत भदैमा राजश्व अनुशन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको थियो । राजश्व अनुसन्धान विभागले नियम अनुसार लिलाम गर्नू पर्ने गाडीहरुमा नक्कली नम्बर प्लेट हालेर उच्च तहका कर्मचारीलाई कोशेली पठाउन लागेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।